Wallet Vagadziri - China Wallet Fekitori, Vatengesi
Crossbody bhegi T-S8098
TIGERNU mafolda maviri chikwama chikwama
Chinyorwa: Iyo ingwe nu fashoni chikwama chinoshandisa splashproof & kukwenya isingagadzi oxford sechinhu chikuru zvinhu, fashoni, yakasimba uye eco-inoshamwaridzika. Iyo zipi inoshandiswa yakagadziriswa, mhando yepamusoro uye kumeso kushandisa.
Unyanzvi: Iyo saizi iri 10.5 * 1.5 * 19.5cm, iine makadhi gumi nemaviri, zviri nyore kutakura makadhi ako uye kusangana nezvinodiwa zvezuva nezuva.One zipi homwe yemari nemari yezvinhu zvakakosha, matatu anopatsanura manotsi. Iyo inokodzerawo 6inch nharembozha Nzira yekuvharwa ine bhatani pafiripi, ichipa yakawedzera kuchengetedzeka kune hwako hwezuva nezuva hupenyu.
Iyo yakanaka yekufambisa shamwari, fashoni dhizaini uye huremu huremu hwevarume, vakadzi, vadzidzi. Unogona kuchengeta muhomwe yako kana kutakura neruoko rwako kuti zvive nyore. Sarudzo yakanaka yehupenyu hwezuva nezuva, kufamba, kushopa, chikoro, basa uye zvichingodaro.
TIGERNU yekutanga dhizaini chikwama
Chinyorwa: Iyo TIGERNU yekutanga dhizaini chikwama shandisa splashproof & kukwenya kusagadzikana zvinhu senge huru zvinhu, fashoni, yakasimba uye eco-inoshamwaridzika.Zipper rinoshandiswa rakagadzirwa neTIGERNU logo, iri yemhando yepamusoro.
Unyanzvi: Iyo saizi iri 11.5 * 1.5 * 21.5cm, iine makadhi masere, zviri nyore kutakura makadhi ako uye kusangana nezvinodiwa zvezuva nezuva.One zipi muhomwe yemari uye zvakakosha zvinhu, maviri anopatsanura manotsi. Inokodzerawo nharembozha ye6inch.
Iyo yakanaka yekufambisa shamwari, fashoni dhizaini yevarume, vakadzi, vadzidzi. Sarudza TIGERNU, sarudza hupenyu huri nani.